युनाइटेड इन्स्योरेन्सको नाफा २ करोड ७४ लाख - Aarthiknews
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लिमिटेडले रू. २ करोड ७४ लाख खुद नाफा गरेको छ । गत वर्ष यसै अवधिसम्म कम्पनीले रू. २ करोड २ लाख यो नाफा गरेको थियो । गत वर्षभन्दा यस वर्ष कम्पनीको खुद नाफा ३५ प्रतिशत बढी भएको हो । यस वर्ष कम्पनीको आम्दानी ३४ दशमलव ८७ प्रतिशत बढी भएकाले नाफामा बृद्धि भएको हो । गत वर्ष रू. ३ करोड ९० लाख आम्दानी गरेको यस कम्पनीले यस वर्ष रू. ५ करोड २६ लाख आम्दानी गरेको हो ।
यस वर्ष गत वर्षभन्दा ६० दशमलव ४० प्रतिशत बढी रू. १६ करोड ४९ लाख कम्पनीले कुल दाबी भुक्तानी गरेको छ । हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. १ अर्ब २ करोड ८१ लाख रहेको छ भने जगेडा कोष रकम रू. ९ करोड ८१ लाख रहेको छ ।
कम्पनीको चुक्तापूँजीमा कुनै परिवर्तन भएको छैन् भने जगेडा कोष रकम ४ दशमलव ९४ प्रतिशत कम भएको हो । बीमा कोष रकम पनि यस वर्ष ३ दशमलव ५० प्रतिशत घटेर रू. ३२ करोड ४४ लाख कायम भएको छ । कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी रू. २ दशमलव ६७ र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. १४१ दशमलव ७७ रहेको छ ।